Izifundo kwiLinux kunye noMthombo oVulekileyo- Ikkaro
yokuqalisa >> software >> Linux
I-Linux itshintshe indlela endisebenza ngayo kwaye ndisebenzisa ikhompyuter, zombini ii-PC kunye neelaptops.
Ukuba yi-OpenSource inxulunyaniswe nomenzi wehlabathi, ukukhwabanisa, ukuguqula, kunye ne-DIY. Ukuba awuzange uzame, kufuneka uzame.
Kweli candelo ndiza kuthetha kwaye ndiqokelele ulwazi malunga I-GNU Linux kwaye yahlukile ulwabiwo, njengokuba sibavavanya.
Ngaba uyazi ukuba yintoni iLinux? Ngaba ucinga ukuba ayenzelwanga wena? Unokukunceda njani? Iya kukuvumela ukuba wenze ntoni? Ngaba kukho ulwazi kwiLinux?
Kodwa ayisiyiyo le yeekhompyuter? Ndiphendula kule nto. Hayi. Nabani na onokufaka ulwabiwo olufana noBuntu, iLinux Mint, iFedora, njl. Ngenyathelo ngenyathelo ujongano lweendawo ezibonakalayo. Ilula kakhulu. Akukho sidingo sokusebenzisa ikhonsoli okanye umgca wekhowudi, konke xa ucofa imouse.
Siza kuyiphendula yonke eminye imibuzo: 9
Fumanisa indlela yokuyiqhuba kunye nesiphelo kunye nokucofa kabini
Los iifayile ngolwandiso .sh ziifayile eziqulethe izikripthi, imiyalelo ngolwimi lwe-bash, eqhuba kwiLinux. SH liqokobhe leLinux elixelela ikhompyuter ukuba yenzeni.
Ngendlela esinokuthi ngayo inokuthelekiswa neWindows .exe.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuyiqhuba. Ndiza kuchaza i-2. Ungayibona kwividiyo kwaye apha ngezantsi linyathelo ngenyathelo kwabo bakhetha izifundo zemveli.
Iinyanga ezintandathu ngeLinux
Mva nje Abantu abaninzi kwindalo yam bandibuza ngeLinux, Bafuna nokuba uyifake ukuze uyivavanye. Ke ngoku bendisebenzisa i-Linux kuyo yonke into iinyanga ezi-6, ndicinga ukuba lixesha elifanelekileyo lokwabelana ngamava am.
Sebenzisa Ubuntu iminyaka emi-6 kwilaptop kodwa hayi ngendlela engathethekiyo okanye yokusebenza, ilaptop yeyokuzonwabisa, ukubrawuza kunye nezinye izinto zeArduino. Kudala ndizama ukufaka ulwabiwo kwiPC yam, kodwa iigrafiki zam ezindala zeGForce 240T zinike iingxaki kwaye nangona bezamile ukundinceda ukulungisa iingxaki nokufaka abaqhubi abafanelekileyo, ekugqibeleni ndidiniwe kwaye ndiqhubeke ngeWindows 7 emva koko 10. Ndizamile iDebian, Ubuntu, iLinux Mint, kunye nezinye kwaye andikwazi ukufaka nayiphi na. Inyani yile yokuba andisakhumbuli ukuba ndizamile into ebingasekelwanga kwi-Debian.
Kodwa kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo bendine-Manjaro distro ekulungele kwi-USB kwaye ndacinga ukuba kutheni? kwaye ubone apho ibisebenza khona kwaye nayo intle. Ndiyamthanda uManjaro. Ndimalunga nenyanga ndisebenzisa olu hambiso kwaye ndathandana noMxholo wayo Maia. Kodwa bekukho uhlaziyo olunike iingxaki kwakhona ngayo yonke iNvidia (izinto eziKhutshwa ngokuRola?) Ke ndizamile uKubuntu, owayengazange akwazi ukuyifaka kwaye andabinangxaki. Kwaye Kudala ndisebenzisa uKubuntu ngaphezulu kweenyanga ezi-6 kwimihla yam yosuku.
Umbono wam wokuqala noBuntu
Kudala ndisebenzisa Ubuntu iiveki ezimbini. Emva kokuthumela inqaku kwi Uyisebenzisa kanjani ubuntu kwi-USB Ndithathe isigqibo sokuyifaka kunye neewindows 7.
Ufakelo olulula kakhulu, olusuka kwi-USB efanayo, lwenza izahlulelo zodwa, kwaye ngonqakrazo olunga-3 okanye olu-4 ukuze lusebenze emva koko kufike isimanga.